पत्रकार बानियाँको मृत्युको कारण खोल्यो ! :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
अर्थ संसार, काठमाडौं– दुई दिनदेखि सम्पर्कविहीन ‘कान्तिपुर’ दैनिकका सहायक सम्पादक बलराम बानियाँको शव मकवानपुरमा फेला परेको छ । भीमफेदी गाउँपालिकाको सिस्नेरीस्थित माण्डु जलविद्युत् आयोजनाको फिल्टरको जालीमा अड्किएका अवस्थामा शव फेला परेको महानगरीय अपराध नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो ।
“स्थानीयवासीले खोला छ, तल नजानुहोस् भन्दाभन्दै उहाँ थाहा छ भन्दै खोलातर्फ जानु भएछ”, महाशाखा प्रमुख थापाले भन्नुभयो, जाँदाजाँदै चिप्लिएर लड्नुभएछ ।” उक्त घटना सोमबार अपराह्न १५ः४५ बजेतिरको हो । त्यसपछि तत्कालै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले समेत खोजी गर्दा फेला पार्न सकेनन् । घटनास्थलमा जुत्ता भने फेला परेको थियो ।
पत्रकार बानियाँ घरबाट भने साउन २५ गते नै निस्किनुभएको महाशाखाले जनाएको छ ।
त्यस दिन उहाँ काठमाडौँको ढुङ्गेअड्डास्थित तीनथानामा रहेको आफन्तकहाँ बसेको खुलेको छ । त्यहाँबाट भोलिपल्ट अपराह्न साढे १२ बजे उहाँ हिँड्नुभएको थियो । त्यसदिन अपराह्न १ बजे कलङ्कीबाट मोबाइल अफ भएको पाइएको छ ।
बुधबार काठमाडौं उपत्यकामा ६३७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, देशभर कति थपिए ?
सिद्धार्थ बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्न अनुमति पायो
एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फण्डले धमाधम लाभांश वितरण गर्दै
२ बुधबार काठमाडौं उपत्यकामा ६३७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, देशभर कति थपिए ?
३ शेयर बजारमा करेक्शन : बढेको बजारमा १ अर्ब ७० करोड
४ एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल–१ को खुद सम्पत्ति मूल्य बढ्यो
५ एनसेलले आजैबाट लागु हुनेगरी ल्यायो यस्तो अफर, कसरी सुचारु गर्ने ? हेर्नुहोस्
६ एनआरएन लघुवित्तले तोक्यो बुकक्लोज मिति
७ प्रभु बैंकको “सहयात्रा समृद्दिको” कर्जा योजना शुभारम्भ
८ भर्ने होइन जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओ ? (सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा)
९ सुनको मूल्य आज पनि ह्वात्तै घट्यो, कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
१० बजार अनुगमनबाट बरामद प्याज खाद्य कम्पनीले बेच्ने !